Summary of books in Nepali /"Doubt" पुस्तकको नेपालीमा सारांश - LweoNepal
Summary of books in Nepali /”Doubt” पुस्तकको नेपालीमा सारांश
Posted on: September 3, 2020 Last updated on: September 14, 2020 Comments:0Categorized in: धर्म र अध्यात्म Written by: Admin
Summary of the book in Nepali /”Doubt” पुस्तकको नेपालीमा सारांश
Doubt: A History पुस्तकले, विज्ञान, धर्म, र आज हामीले सोचेको तरिकामा शंकाको कारण परेको ऐतिहासिक प्रभावलाई एक आकर्षक दृष्टिकोणबाट हेर्न मद्दत गर्छ।
परिवर्तनको आशा गर्नुहोस्। मृत्यु स्वीकार्नुहोस्। जीवनको आनन्द लिनुहोस्। मार्कसले वर्णन गरे अनुसार जुन दिमागले तपाईलाई अहिले सम्म कष्टहरूबाट बचायो त्यहि दिमागले तपाईलाई भबिस्यमा अाउने समस्यामाहरुबाट पनि बचाउछ।
यो स्पष्ट छ कि, प्रख्यात ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू जस्तै ः Confucious, Socrates, र Einstein महान् चिन्तकहरू थिए। समाजमा उनीहरूको प्रभाव आजसम्म पनि छ। तर यहाँ केबल कम मात्र ज्ञात प्रक्षेपण छन्, जुन यी मानिसहरूले साझा गरेका थिए ; तर सबै प्रक्षेपण साझा भएको छैन भन्ने कुरा केबल शंका मात्र हो।
तपाइँलाई स्वीकार्न गाह्रो होला, तर अविश्वास Doubt को इतिहासले मानव सभ्यतामा आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसले दृढ आधिकारिकहरुलाई चुनौति दिदै धर्म र विचारहरु को नयाँ विश्वास सिर्जना गर्छ। शंका Doubt ले हामीलाई वैज्ञानिक आविष्कार पनि प्रदान गरेको छ जुन Doubt बिना प्राप्त हुनेथिएन।
दुर्भाग्यवश हामी प्रायः सन्देहवाद skepticismको, बारेमा सुन्दैनौं किनभने ऐतिहासिक रूपमा यस दर्शनशाष्त्रलाई लुकाइरहिएको छ। समाजका नेताहरू/मार्गदर्शकहरु प्राय: शंकालाई आफ्नो अधिकार र ओहदाका लागि खतराको रूपमा देख्छन्। Jennifer Hectको Doubt: A History: The Great Doubters and Their Legacy of Innovation from Socrates and Jesus to Thomas Jefferson and Emily Dickinson पुस्तकले विगतका हाम्रा प्रख्यात नेताहरूले सत्यको बारेमा गरेका गहिरा भावनाहरू पत्ता लगाउँदछन्। यो पुस्तकले इतिहासको यस्तो पटामा लैजान्छ, जुन तपाईले सोच्नु पनि भएको थिएन।
यहाँ केहि महत्त्वपूर्ण पाठहरू छन्, जुन मैले शंकाको ईतिहास बारे सिक्ने मौका पाए।
धर्मको इतिहास र बृद्धिको लागि महत्त्वपुर्ण विषयवस्तु सन्देहवाद हो।
समाजमा शंकाशील व्यक्तिको अनुपस्थिति भएकोभए, विज्ञान आजको जस्तो विकसित हुने थिएन।
तपाईं धार्मिक/विज्ञानवेत्ता, वा दुबै, जो भए पनि शंकाको फाइदाहरू उठाउन सक्नुहुन्छ।
के तपाईं जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ कि, शंकाले मानिस जातिको इतिहासमा कत्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ?आउनुहोस् हेरौं, Jennifer Hechtले हामीलाई यसको बारेमा के सिकाउन खोजेकि छिन्!
पाठ १: धर्महरू सन्देहवादको कारण बढेको, परिवर्तन भएको, र जन्मेको पनि हो।
विश्वासले धर्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर शंका-विश्वासको प्रतिनाम, पनि मन्दिर/चर्च/मस्जिद/स्तूप का विगत र वर्तमानमा उपस्थित छ। त्यो किनभने धार्मिक विश्वासको पूर्ण आधार नै यो हो कि, तपाईं केहि पनि प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न।
हामीले इतिहासभरि धेरै चोटि देखेका छौँ, जहा सन्देहवादी व्यक्तिहरुले, धार्मिक अधिकारीहरूको
विरोध गरेका हुन्छन्। तिनीहरूले धर्मले समर्थन गरेका तार्किक गल्तीहरूको पहिचान गरेर र,
अधिक अर्थ बनाएको वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रकट गर्दै विरोध गर्छन्।
उदाहरणका लागि ग्रीक विचारक Xenophanesलाई लिनुहोस्। उनले तर्क गरे कि, “देवताहरू रहस्यमय वा ईश्वरीय उत्पत्ति होइनन्, जस्तो ग्रीकहरूले सोचेका थिए। बरु, ती केवल मानिसहरु थिए-महान मानिसहरु थिए। समाजमा उनीहरूको प्रभाव यति महत्त्वपूर्ण थियो कि तिनीहरूलाई समयको साथ भव्य उत्पत्ति कथा र विशेष शक्तिहरूले आदर्शित गरियो।”
अर्को ठूलो सन्देहवादी व्यक्तिहरु मध्य Martin Luther एक थिए, जसले चर्चको ढोकामा 95 वटा
शोध प्रबंध टांगिदिए। उनले यो बाइबलसँग मेल नखाएको, Catholic Churchको शिक्षाको विरोधमा गरेका थिए। चर्चलाई ध्वस्त पार्नुको सट्टा लुथरले यसलाई परिष्कृत गर्ने अवसरको रूपमा लिए। उनको प्रयासले विरोधवाद Protestantism को नेतृत्व गर्‍यो।
बौद्ध धर्म पनि हिन्दु धर्मको परिस्कित रुप मानिन्छ। यदि तपाईं आफ्नै धर्मलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ भने, विगतका यी उदाहरणहरूबाट सिक लिनुहोस्। तपाईले अझ राम्रोको लागि परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ।
पाठ २ः सन्देहवादी व्यक्तिहरुले विज्ञानको प्रगतिमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेका छन्।
शंका विज्ञानको जन्मस्थल हो। शुरुआती समयमा, मान्छेसँग बिजुली जस्ता प्राकृतिक घटनाहरूको वर्णन गर्न केहि सिद्धान्तहरू थिए। जब मानिसहरूले यी घटनाहरूको कल्पित कथाहरूबारे प्रश्न गर्ने निर्णय गरे, तब केवल व्याख्या गर्न को लागी, हामीले वैज्ञानिक खोजहरू शुरू गरेका थियौ ?
हामी यि प्राक्रितिक घटनाको अनुसन्धानको ईतिहासको बारेमा जान्न 585 BCE सम्म पछाडि जान सक्छौं। पहिलो पश्चिमी दार्शनिक भनेर चिनिने युनानी दार्शनिक Thalesले प्राक्रितिक घटनाहरूको व्याख्या गर्ने परम्परागत तरिकामा शंका गरे। उनले आफ्नै वैज्ञानिक तरिकाहरू विकास गरे।अन्ततः उनले सौर्य ग्रहणको सही पूर्वानुमान गर्न सफल भए!
हाम्रो युगको नजीक, संकाहरुले विज्ञानमा परिवर्तन गराएको केस हेर्न Charles Darwinको
अनुसन्धानलाई लिन सक्छौं। डार्विनको सोच्ने तरिकाले उनलाई आफु विश्वस्त हुन नसकेका धारणाहरूमा प्रश्न गर्न उक्सायो। यसले उनलाई खुल्ला विचार साथ अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्यो, जस कारण वंशाणुहत गुणको बारेमा परम्परागत विश्वासलाई चुनौती दिने काम गर्यो। केही समय पछि, उनको शंकाले उनको प्रख्यात evolutionको सिद्धान्तको सृजना गर्‍यो।
चाहे तपाई एक नवोदित नयाँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ वा धेरै समयदेखि नै हुनुहुन्छ, शंकाको डर नमान्नुहोस्। तपाईंको शंकाको अन्वेषणले अर्को महान वैज्ञानिक खोजमा नेतृत्व लिन सक्छ !
पाठ३: तपाईको शंकाबाट तपाईले लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले जस्तो सुकै धार्मिक/विज्ञानवेत्ता आस्था राखे पनि।
Rene Descartesले आफ्ना धेरै अविश्वासहरू पहिचान गरेर Meditation on First Philosophy सुरु गरे। उनले वास्तविकता, आफ्नो इन्द्रियको विश्वसनीयता, र ईश्वरको अस्तित्वको बारेमा प्रश्न गरे।Descartes अनुसार यो सबै दुष्ट आत्माले चलाएको हुनसक्थ्यो। यद्यपि उनले आफ्नो शंका हटाउन नसकेपनि, तर उनले महसुस गरे कि ईश्वरको अस्तित्व छ।
शंकाको अन्य फाइदाहरू पनि छन्। जब व्यक्तिहरू मनमा प्रश्नको साथ भेला हुन्छन्, तिनीहरूले सकारात्मक रूपमा एक अर्कालाई प्रभाव पार्छन्। एक अर्काको विचारहरूलाई केलाउदा र आफुमा भएको शंका स्पष्ट पार्न काम गर्दा उनीहरू एक्लै सिक्ने भन्दा धेरै कुरा सिक्न मद्दत गर्दछ।। खुशी, उत्पादक जीवन अन्य समान विचारधाराका व्यक्तिहरूको शिक्षाको समीक्षाको परिणाम हो ।
शंकाको कारण आएको भ्रमलाई हटाउनुहोस्र, जसबाट तपाईंले शंकाको आर्को फाइदा थाहा पाउन सक्नु हुन्छ। प्रश्न सोध्नुले ले हामीलाई, जीवनको बारेमा केहि चीजहरू परिवर्तनशिल हुदैनन् भनेर जान्न मद्दत गर्छ । कहिलेकाँही हामीले नियन्त्रणको केन्द्र बिन्दुको रूपमा पनि हेर्दा, हामी के परिवर्तन गर्न सक्दछौं के सक्दैनौं भनेर थाहा पाउछौँ, हामीसँग हाम्रो जीवन सुधार गर्ने शक्ति हुन्छ।
उदाहरणका लागि मृत्युलाई हेरौं। शंकाले हामीलाई यो बुझ्न सहयोग गर्दछ, कि मृत्यु अपरिहार्य भएकाले, र मृत्यु पछि हामीसँग के हुन्छ भनेर जान्ने कुनै तरिका नाभएकाले, यसको चिन्ता गर्नु बेकार छ। Socratesको प्रख्यात भाषणमा, उनले यो तर्क प्रयोग गर्न सिकाए कि हामीले मृत्युको अनिश्चिततालाई स्वीकार्नु पर्छ। यसो गर्नाले हामीलाई Socratesले जस्तै मृत्युलाई शान्तपूर्वक सामना गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
Tagged as: summary of book summary of book doubt in nepali summary of book in nepali summary of books summary of books in nepali सुममारय ोउ बोोक िन नेपालि
Previous Post Summary of books in Nepali/ “The Pragmatist’s Guide To Relationships” पुस्तकको नेपालीमा सारांश
Next Post Summary of books in Nepali /”13 Things Mentally Strong Parents Don’t Do” पुस्तकको नेपालीमा सारांश